KU SAABSAN HORUMARINTA Taranka BADHASHADA EE GOBOLKA NOVOSIBIRSK
Maxay noocyada baradhada ay u abuureen Novosibirsk soosaarayaasha xiisaha leh? Shaqooyin noocee ah ayaa saynisyahannadu naftooda u dejiyaan maanta? Sidee ayey u qiimeeyaan rajada shaqadooda?
Joornaalka "Nidaamka Baradhada" wuxuu uga hadlay dhammaan su'aalahan khabiirka caanka ah ee ku saabsan baradhada, oo ah hormoodka cilmi-baarista Xarunta Cilmi-baarista Federaalka "Machadka Cilmiga Sayniska iyo Hidaha ee SB RAS", Musharaxa Cilmiga Beeraha Nikolai Polukhin.
Sannadkii 1978-kii, soosaarayaasha Siberia waxay abuureen noocyo kala duwan LINA: dhalidda sare welina aan lala tartamin guud ahaan iska caabbinta cudurada. Waxyaabaha abuurka ee noocyadan kala duwan ayaa baahi weyn loo qabaa, waxay ku dhowdahay "geedka canabka ah" ee ay iibsadeen beeraha fog ee Bariga Fog (gaar ahaan, gobolka Amur). Beeraleydu waxay yiraahdaan Lina oo keliya ayaa u adkeysan karta culeyska badda: qaddar badan oo roob ah, qoyaan badan oo joogto ah iyo, sida waafaqsan, goor-dambe.
Shan sano ka dib, noocyada ayaa u muuqday SAFO... Waxay si fiican isu caddeysay markii lagu koray dhagarta shaqsiyadeed: dhadhan fiican, digriiga waaweyn. Dadka degan xagaaga waxay ku qaateen farxad.
Laakiin labadan noocba waa bartamihii-hore, iyo xaaladaha Siberia, kuwa hore ayaa baahi weyn loo qabaa. JNA: waxay sameysaa goosashada ugu dambeyn 20-ka Julaay, cimilada deegaanka tani waa natiijo aad u fiican. Guusha soo socota ee soosaarayaasha Novosibirsk waa noocyo kala duwan ZLATKA: xilliga-bartamaha, oo leh dhadhan aad u fiican (Adretta dhiiggiisa ayuu ku jiraa, oo kanuna waa hoggaamiye aan la dhaafi karin xagga dhadhanka). Waxay kaloo leedahay wax soo saar badan.
- Nikolai Ivanovich, baradhadu miyuu runtii yahay dalag muhiim u ah gobolka Novosibirsk?
Baradhadu waxay muhiim u tahay guud ahaan Ruushka, maahan wax aan micno lahayn oo ay ugu yeeraan "rootiga labaad". Iyo dadka deggan Siberia iyo Bariga Fog, wuxuu inta badan u adeegi jiray rootiga ugu horreeya. Heerka isticmaalka baradhada ee gobolladani wali wuu ka sarreeyaa Ural iyo qaybta Yurub ee dalka.
Waxaan ku qanacsanahay in baradhada ugu macaan ay ka baxaan Siberia, maaddaama cimilada gobolkeennu ay ku habboon tahay wax soo saarkeeda. Laakiin shuruudaha alaabtu sidoo kale way ka culus yihiin.
- Bixiyeyaashu ma leeyihiin wax ay ku shaqeeyaan?
Xaqiiqdii. Had iyo jeerna ahmiyad weyn ayaanu siinay jihadaas. Taranka baradhada ee gobolka Novosibirsk wuxuu bilaabay inuu howl galo in kabadan konton sano kahor. Shaqadani waxay ka bilaabatay machadka, Galina Petrovna Shushakova.
- Beeralay badan oo xaaladaha casriga ah isku dayaya inay la qabsadaan shuruudaha silsiladaha tafaariiqda iyo markay dooranayaan noocyo kala duwan oo diiradda la saarayo muuqaalka, ku habboonaanta kaydinta muddada-dheer, oo aan ahayn dhadhanka digriiga. Soosaarayaasha Novosibirsk miyey tixgelinayaan isbeddelladan?
Muddo dheer, tarankayagu ma uusan fiiro u lahaan jirin shuruudaha dibedda (qaabka tuber, midabka maqaarka, qoto dheer indhaha), sidaa darteed noocyada maxalliga ahi way ka liiteen caannimada tartamayaasha shisheeye ee "quruxda badan".
Hadda kuwa wax soo saara ayaa isku dayaya inay ilaashadaan faa'iidooyinka baradhada Siberia, iyagoo waxoogaa "ganacsi" ah ku daraya bangiga doofaarka ee faa'iidooyinka. Marka, noocyada Sokur iyo Adar waxay ku jiraan tijaabooyin culeys ah. Labadaba macaan iyo quruxba, rajo weyn ayaan ka qabnaa iyaga.
Waxaan diyaarinaynaa laba nooc oo kale oo rajo leh oo loogu talagalay wareejinta tijaabooyinka kala duwan ee 2021: Alka iyo hybrid 154 (weli maanan la imaan magac).
- Waa maxay xuduudaha kale ee noocyada cusub ee Siberia lagu kala sooci doono?
Waxaan ka shaqeyneynaa sidii loo hubin lahaa in noocyadeena lagu kala saaro soo saar badan, dhadhan fiican, iska caabin cudur, ku habboonaanta kaydinta muddada-dheer.
- Waxaa la qorsheynayaa in la dhiso warshad loogu talagalay soo saarista Chips-ka shirkadda ee gobolka Novosibirsk PepsiCo... Tani waxay ka dhigan tahay in noocyo loogu talagalay ka shaqeynta ay noqon doonaan kuwo dalab ah. Tani ma sidoo kale waa aag muhiim u ah taranka gobolka?
Khadkeena noocyada ah waxaa ka mid ah kuwa ku habboon ka baaraandegidda baradhada iyo jalaatada qalalan: Sappho, Zlatka, Lina. Iyo, dabcan, ka shaqeynta jihadaani way sii socon doontaa, in kasta oo ay tahay in maskaxda lagu hayo in abuuritaanka noocyo kala duwan oo wax qabadku yahay hawl aad u adag
- Machadka Cilmibaarista Siberia ee wax soo saarka dhirta iyo taranka hadda waa laan ka tirsan Xarunta Cilmi Baarista Federaalka "Machadka Cilmiga Biyoolajiga iyo Hiddaha ee SB RAS". Ma jiraan wax isbeddelay oo ku saabsan shaqooyinka ay leeyihiin kalkaaliyayaasha machadka cilmi baarista ka dib markay ku biiraan Xarunta Cilmi-baarista Federaalka
Sannado badan, shaqada taranka ee Machadka Cilmi-baarista waxaa lagu fulin jiray qaab dhaqameed, waxay ku saleysneyd isku-dhafid is-dhex-dhexaad ah iyo is-dhex-dhexaad ah. Hadda waxaan u gudubnay heer sare. Si wadajir ah ula shaqeyno shaqaalaha sheybaarka tafatirka genomic ee machadka cilmiga cilmiga cudurada iyo hidaha, waxaan isticmaalnaa qaababka xulashada u janjeedha calaamadaha. Dalbashada qaababkan waxay si dhakhso leh u dedejineysaa bixinta natiijooyinka. Waxaan u maleynayaa in sanadkan aan mar hore tijaabin doonno iskudhafyadii ugu horreeyay ee lagu abuuray teknoolojiyadaan.
- Machadka Cilmibaarista Siberia ee Dhirta Dhirta iyo Taranka wuxuu caan ku yahay ururinta hodanka ee noocyada baradhada. Waxbadan nooga sheeg
Lahaanshaha ururinta ballaaran ee samballada asalka ah waxay noo oggolaaneysaa inaan qabanno shaqo taran badan oo la beegsanayo iyo heer aad u sarreeya. Lambarkayaga ururinta 338 in vitro shaybaarrada, waxaa jira 185 nooc, oo 95 ka mid ah la dayactiray Xulitaanka waxaan sidoo kale adeegsannaa "duurjoog", oo aan ka leenahay 35 muunad. Waxaan sidoo kale kaydineynaa 135 muunad oo ka mid ah ururinta VIR (shaybaarada laga helay barnaamijka KNTP "Horumarinta taranka iyo wax soo saarka abuurka ee Ruushka").
Kheyraadka ururintayada waxaa badanaa adeegsada kuwa ku takhasusay ururada sayniska ee Siberia Federal District (Omsk, Kemerovo, Tomsk, Krasnoyarsk, iwm), haddii ay ubaahanyihiin nooc Tijaabooyin, waxaan bixin karnaa ku dhowaad amar kasta.
- Dhiirrigaliyayaasha SibNIIRS waxay helaan wax abuur abuur baradho taran sare leh. Sidee loo iibiyaa alaabtan?
Waxaan ku dhufaneynaa walxaha abuurka ah ee super-super-elite oo waxaan u iibinnaa alaabtan kaliya beeraha abuurka. Gobolka Novosibirsk waxaan lashaqeyneynaa shirkadda Agros iyo qeybteeda cilmi baarista iyo soosaarka ee Michurinets SPH. Waxaan sidoo kale siinaa abuur iniinyaha shirkadaha abuurka ee Altai Territory iyo Primorye.
Sannadkan waxaan ka beereynaa baradhada iniinyaha ee noocyadeenna kala ah Lina iyo Zlatka iib ahaan. Waxaan bilaabeynaa inaan wax yar isku dhufanno Sokur (waxaan rajeyneynaa in soone loo qoondeeyo). Intaa waxaa dheer, waxaan ku dhufaneynaa noocyo ka mid ah kuwa loo baahan yahay ee ka baxa beeraleyda baradhada ee gobolka iyo beeraleyda: Rosara, Red Scarlett, Adretta, oo machadkeenu asal u yahay. Waxaan iibinnaa oo kaliya alaab tayo sare leh oo la xaqiijiyay (shahaadooyinka waxaa bixiya Xarunta Beeraha ee Ruushka iyadoo lagu saleynayo natiijooyinka falanqaynta PCR ee digriiga). Taas la'aanteed, meelna. Waxaan Siberia ku leenahay xeerar fulineed oo aad u adag.
- Machadka Cilmibaarista Siberia ee Waxsoosaarka Dhirta iyo Taranka waa xubin ka mid ah barnaamij hoosaadka "Horumarinta taranka baradhada iyo soosaarka abuurka ee Xiriirka Ruushka" ee Barnaamijka Sayniska iyo Farsamada ee Horumarinta Beeraha ee 2017-2025. Noo sheeg howlaha horyaala kuwa soosaarayaasha ah maxayse muhiim u tahay kaqeybgalka barnaamijkaan hoose ee machadka?
Hawlahayaga ugu waaweyn ayaa ah: abuurista noocyo wax soo saar sare leh oo leh astaamo daboolaya baahiyaha wax soo saarka iyo isticmaalka casriga ah, dayactirka iyo ballaarinta ururinta xulashada Tijaabooyin iyo gudaha vivo, soo-saarista walxaha bilaabaya (minitubers) ee aeroponic iyo hydroponic rakibidda qaddarka hubinaya habka abuurka (2019 - 20 kun oo gogo '; sannadka 2020 - 23 kun oo gogo', 2021 - 25 kun oo gogo '); hubinta soo saarista abuurka baradhada qaybta super-superite (sannadka 2020 - 48 tan, sannadaha soo socda - 50 tan).
Waxaan ogaan karaa in hirgalinta subroutine-ka ay aad muhiim noogu tahay. Markii aan noqonnay kaqeybgalayaasheeda, waxaan taageero xoogan ka helnay gobolka. Lacagaha deeqda ah waxaa loo adeegsaday in si buuxda loo cusbooneysiiyo qalabka iyo saldhigga farsamada: waxay dib u dhis ku sameeyeen shaybaarka bayoolajiga, waxay ku rakibeen aeroponic iyo hydroponic dhirta wax soo saarka qashin-qubka, gooyeyaal la soo iibsaday, sariir-sameeyeyaal, beero, iyo isku-darka. Haatan waxaan dhameystireynaa dhismaha xarun keyd casri ah. Taranka baradhada ee SibNIIRS maanta waxaa lagu fuliyaa heer casri ah, saynisyahannadeenuna waxay qabaan dareen xoogan oo ah in baradhada wali lagu qadariyo dalkeena
Fasalka hore ee dhexe. Soosaarka la suuq geyn karo 213-496 c / ha. Qaaxadu waa oval. Indhuhu way tiro yar yihiin, dhexena way qoto dheer yihiin. Saxarka waa cad yahay. Cudurka tuber-ka la iibsan karo waa 105-250 g. Diirka waa siman yahay, jaalle. Waxyaabaha istaarijka ah 11,2-18,5%.
U adkaysta kansarka baradhada iyo phytophthorosis ee dushooda iyo digriiga. U nugul nematode baradho dahabi ah.
Digriiga wuxuu ku habboon yahay soo saarista baradhada qalalan iyo jibbaarada.
Fasalka hore ee dhexe. Waxsoosaarka la suuq geyn karo 183-395 c / ha. Tubku waa oval leh indho yar yar. Rind waa iftiin beige. Saxarka waa kareem. Cudurka tuber-ka la iibsan karo waa 111-232 g. Waxyaabaha ku jira istaarijka waa 12,7-16,7%.
U adkaysta wakiilka sababa kansarka baradhada, nematode baradho dahabi ah oo dahab ah, mosaic laalaabmay oo isku duuban, fayraska warqada-roganaya. Digriiga wuxuu ku habboon yahay soo saarista baradhada qalalan iyo jibbaarada.
Zlatka kala duwan
Sokur kala duwan
Mid-xilliyeed kaladuwan. Soosaarka la iibsan karo 162-406 c / ha.
Tubada waxaa lagu wareejiyaa celcelis ahaan qoto dheer indhaha. Diirka waa jaalle. Saxarka saxarku waa jaalle khafiifa. Cudurka tuber-ka ganacsiga waa 109-160 g. Waxyaabaha ku jira istaarijka waa 15,7-18,0%.
U adkaysta kansarka baradhada, mosaic duuduuban iyo fayraska duudduuban ee caleemaha. Si dhexdhexaad ah ugu nugul dusha sare oo si dhexdhexaad ah ugu adkaysata uur-ku-dhaca goor dambe ee digriiga. Uu saameeyay nematode.
Fasalka hore ee dhexe. Waxay ku jirtaa imtixaannada kala duwan ee gobolka.
Tubku waa qaab muuqaal ah, oo leh indho sarcaad ah. Diirka waa casaan. Saxarka waa jaalle.
Waxay leedahay nuxur aad u sarreeya oo u adkaysata cudurrada fayraska.
Kala duwanaansho hore u bislaaday. Soosaarka la suuq geyn karo 196-360 c / ha.
Tubku waa oval-wareegsan oo leh indho yar yar. Rind waa iftiin beige. Saxarka saxarku waa jaalle khafiifa. Miisaanka tuber la iibsan karo 110-200 g.
Waxyaabaha istaarijka ah 14,3-15,1%.
U adkaysta wakiilka sababa kansarka baradhada, nematode baradho dahabi ah oo dahab ah, mosaic laalaabmay oo isku duuban, fayraska warqada-roganaya.
Tags: 2020 .3baradhada sii kordheysa ee gobolka novosibirskAbuurka sii kordhaya ee gobolka novosibirsknoocyo baradho ah
Rosselkhoztsentr wuxuu daabacay qiimeynta noocyada ugu caansan ee dalagyada beeraha waaweyn ee Russia
Belarus, baradhada waxaa laga soo gooyaa kala badh aagga
Joornaalka "Nidaamka Baradhada"